टुँडिखेलमा साकेला उधौलीको रौनक (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
टुँडिखेलमा साकेला उधौलीको रौनक (फोटोफिचर)
डिसी नेपाल , २१ पौष २०७५
काठमाडौं। छिटको फरिया, मखमली चौबन्दी चोलीमा सजिएर टुँडिखेलमा कम्मर मर्काउँदै (सिली नाच्दै) थिइन् खोटाङ सिमपानीकी कल्पना राई। शिरमा श्रीबन्दी, श्रीफूल अनि चेप्टे सुन, नाकैमा ढुङ्ग्री कानमा बुलाकीले चटक्क परेकी कल्पना बेहुली झैँ सिँगारिएकी थिइन्।
ढाकाको सल, फुर्का, कम्मरमा पोटुकी, सुर्केथैली, खुर्मी हारी र पैसाको माला पहिरिएकी उनी सेलीब्रेटीका रुपमा सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिन व्यस्त देखिन्थिन्।
कल्पनाजस्तै पहिरनमा ठाट्टिएकी उदयपुर कटारीकी चमेना राई पनि आफ्नो पोशाकप्रति निकै गर्व गर्दै थिइन्। किराँती परम्परागत वेषभूषामा सजिएकी यी प्रतिनिधि पात्र मात्र हैन शनिबार टुँडिखेलमा साकेला उधौली चाड मनाउन जम्मा भएका किराँती समुदायका बालक, युवादेखि वृद्धसम्ममा उल्लासको रौनक छाएको थियो।
वर्षमा दुईपटक भएपनि आफ्नो परम्परागत पोशाकमा सजिएर साथीभाइसँग भेटघाट र सुखदुःख आदानप्रदान गर्न पाएकामा सबैका मुहारमा उमङ्ग छाएको थियो।
यस्तो माहोल जुटाइदिएको हो किराँतको महान चाड ‘साकेला उधौली–५०७८’ ले। किराँत राई यायोक्खा काठमाडौँले शनिबार टुँडिखेलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राजधानीसँगै देशभरबाट जम्मा भएका किराँत समुदायको दरिलो जमघट थियो।
“सबै लगाउन गाह्रो छ, एक दिन भए पनि आफ्नो पहिरनमा सजिन पाउँदा र साथीसङ्गीसँग भेटघाट गर्न पाउँदा धेरै गर्वको अनुभूति भएको छ”, चमेनाले भने।
कल्पनालाई पनि आफ्नो पहिचानमा प्रस्तुत हुन पाउँदा गौरव लागेको रहेछ। उनले भने, “वर्षमा दुईपटक यसरी आफ्नो पहिचानको भेषमा उपस्थित भएर साथीभाइबीच मनोरञ्जन गरिन्छ, युवा पुस्ताले आफ्नो संस्कृति र रहनसहनलाई भुल्न हुँदैन ।”
खाढीको कोट दौरासुरुवाल, ढाका टोली, फुर्का अनि कम्बरमा खुकुरी भिरेका भोजपुर छिनामुखुका अशोक राई सिली नाच्न हतारिँदै थिए। चाड मनाउनै काठमाडौँ आएको बताउने उहाँले संस्कृति र पहिचानसँग घुलमिल हुन पाउँदा हर्षित भएको सुनाए।
मानव सभ्यतादेखि वर्तमान सययमा सम्पूर्ण समाजमा घटेका घटनालाई साकेला सिली छारा नाचेर प्रस्तुत गर्नु नै साकेला सिली हो। यसमा सिकार खेल्नेदेखि कृषि उत्पादनको युग, उद्योग उत्पादन हुँदै वर्तमान युगमा लुगा लगाएर नक्कल झक्कल आदिलाई नाचद्वारा झल्काइन्छ।
किराँत मात्र हैन, अन्य समुदायका मानिसको पनि उत्तिकै भीड देखिन्थ्यो।
किराँती समुदायको खानाका विभिन्न परिकार, पहिरनका वस्तु आदिका कक्षमा निकै भीड लागेको थियो।
टुँडिखेलमा किराँती पहिरनमा विभिन्न समूह बनाएर साकेला नाच्नेको निकै रौनक थियो।